फाइदा र विभिन्न भल्भ को नुकसान - चीन जस्तै भल्भ (टियांजिन)
+ -2 86-२२-8866२०१०
Wafer र lug प्रकार BV
फायर फाइटिंग BV
विलक्षण तितली भल्भ
हार्ड सील गेट भल्भ
नरम छाप गेट भल्भ
जल नियन्त्रण वाल्व
विभिन्न भल्भको फाइदा र हानि
१. गेट भल्भ : गेट भल्भले भल्भलाई बुझाउँदछ कि बन्द हुने सदस्य (र्याम) च्यानल अक्षको ठाडो दिशामा सर्छ। यो मुख्यतया पाइपलाइनमा काट्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन पूर्ण खुला वा बन्द छ। सामान्यतया, गेट वाल्भहरू नियमित बहावको रूपमा प्रयोग गरिदैन। यो कम तापक्रम दबाव वा उच्च तापक्रम र उच्च चापको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र भल्भको बिभिन्न सामग्रीबाट बनाउन सकिन्छ। तर गेट भल्भ सामान्यतया पाइपलाइन माटो र अन्य मिडिया प्रवाहमा प्रयोग हुँदैन
Fluid तरल प्रतिरोध सानो छ;
Opening खोल्न र बन्द गर्न टोक़ सानो छ;
Two यो औंठी नेटवर्क पाइपलाइन मध्यम दुई दिशामा बगिरहेको संग प्रयोग गर्न सकिन्छ, कि, मध्यम प्रवाह को दिशा सीमित छैन;
Fully जब पूर्ण रूपमा खुला हुन्छ, काम गर्ने माध्यमद्वारा सिलिंग सतहको कटाई स्टप भल्भको भन्दा सानो हुन्छ;
Body शरीरको संरचना सरल छ र निर्माण टेक्नोलोजी राम्रो छ;
Structure संरचना लम्बाई छोटो छ।
External बाह्य आयाम र खोल्ने उचाई ठूला छन्, र स्थापनाको लागि ठाउँ पनि ठूलो छ;
Opening खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियामा, सिलिंग सतह तुलनात्मक रूपमा घर्षण हो, र घर्षण ठूलो छ, उच्च तापमानमा घर्षण घटना उत्पन्न गर्न पनि सजिलो छ;
; सामान्यतया, गेट भल्भमा दुई सीलिंग सतहहरू हुन्छन् जसले प्रसंस्करण, पिसाई र मर्मतका लागि केही कठिनाइहरू थप्दछन्;
Opening खुल्ने र बन्द हुने समय लामो छ।
२. बटरफ्लाइ भल्भ भनेको भल्भ हो जसले डिस्क प्रकारको खोल्ने र बन्द गर्ने भागहरू प्रयोग गर्दछ back ० open खोल्न, बन्द गर्न र तरल पदार्थ पसेज समायोजन गर्न पछाडि र अगाडि घुम्न।
① यससँग साधारण संरचना, सानो मात्रा, हल्का तौल र कम खपत हुन्छ, र ठूलो क्यालिबर वाल्भमा प्रयोग हुँदैन;
Opening उद्घाटन र बन्द छिटो छन्, र प्रवाह प्रतिरोध सानो छ;
Suspended यो निलम्बित ठोस कणको साथ मध्यममा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र सिउल सतहको शक्ति अनुसार पाउडर र दाना मिडियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भेन्टिलेसन र धुलो हटाउने पाइपलाइन दुई तर्फी खोल्न र बन्द गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र ग्यास पाइपलाइन र धातु विज्ञान, प्रकाश उद्योग, पावर र पेट्रो रसायन प्रणालीको जलमार्गमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ।
Flow प्रवाह नियमन दायरा ठूलो छैन, जब उद्घाटन %०% पुग्छ, प्रवाह 95%% भन्दा बढि प्रविष्ट हुन्छ;
Butter पुतली वाल्भ संरचना र सिलि material सामग्रीको सीमितताको कारण, यो उच्च तापक्रम र उच्च दबावको पाइपलाइन प्रणालीको लागि उपयुक्त छैन। सामान्य कामकाजी तापमान 300 below र PN40 भन्दा कम छ;
Ball सिलिंग प्रदर्शन बल भल्भ र स्टप भल्भको तुलनामा कम छ, त्यसैले यो छाप लगाउनको लागि धेरै उच्च छैन।
3. Ball : यो प्लग भल्भबाट विकसित गरिएको छ। यसको खोल्ने र बन्द हुने भागहरू एक गोला हो, जुन स्टेमको अक्षको वरिपरि बल 90 ०। घुमाएर खोल्न र बन्द गर्न सकिन्छ। बल भल्भ मुख्य रूपमा पाइपलाइन मा काट्न, वितरण र मध्यम प्रवाह दिशा बदल्न प्रयोग गरिन्छ। भि-आकारको उद्घाटनको रूपमा डिजाइन गरिएको भल्भमा राम्रो प्रवाह रेगुलेसन प्रकार्य पनि छ।
Flow प्रवाह प्रतिरोध सबैभन्दा कम हो (वास्तवमा ०);
② यो संक्षारक मध्यम र कम उमाल्ने बिन्दु तरलमा विश्वसनीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि यो अपरेशनमा अडिनेछैन (जब त्यहाँ स्नेहक छैन);
Pressure दबाव र तापक्रमको दायरामा, सिलिaling पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ;
④ यसले छिटो खोल्ने र बन्द हुने महसुस गर्न सक्छ, र केहि संरचनाहरूको खुल्ने र बन्द हुने समय ०.०5-०.१ सेकेन्ड मात्र छ, ताकि यो परीक्षण बेंचको स्वचालन प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निश्चित गर्न। जब भल्भ खोलियो र चाँडै बन्द हुन्छ, अपरेसन प्रभावबाट मुक्त हुन्छ;
Ball बल बन्द गर्ने भागहरू स्वचालित रूपमा सीमा स्थितिमा अवस्थित गर्न सकिन्छ;
Medium कार्य माध्यम दुबै पक्षहरूमा विश्वसनीयताका साथ बन्द गरिएको छ;
Fully जब पूर्ण रूपमा खुला र पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ, बल र सिटको सिलि surface सतह मध्यमबाट पृथक हुन्छ, त्यसैले उच्च गतिमा भल्भको माध्यमबाट पार गर्ने माध्यमले सिलिंग सतहको क्षरण निम्त्याउँदैन;
Low यसको कम्प्याक्ट संरचना र हल्का तौलको कारण कम तापक्रम मध्यम प्रणालीको लागि यो सबैभन्दा उचित वाल्भ संरचनाको रूपमा लिइन्छ;
Val भल्भको शरीर सममित छ, विशेष गरी वेल्डेड भल्भ शरीर संरचना, जुन पाइपबाट राम्रोसँग तनाव सहन सक्छ;
Closing बन्द हुने भागहरू बन्द हुँदा उच्च चापको भिन्नता सामना गर्न सक्दछ। (११) पूर्ण वेल्डेड भल्भ शरीरको साथ बल भल्भलाई सिधा भूमिगत रूपमा गाड्न सकिन्छ, जसले भल्भ आन्तरिक क्षतिबाट मुक्त बनाउँछ, र अधिकतम सेवा जीवन 30० वर्षसम्म पुग्न सक्छ जुन तेल र प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनहरूको लागि सबैभन्दा उत्तम भल्भ हो।
① किनकि भल्भ सीटको मुख्य सिaling्ग रि ring्ग सामग्री पोलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन हो, यो लगभग सबै रासायनिक पदार्थहरूको लागि निष्क्रिय छ, र सानो घर्षण गुणांक, स्थिर प्रदर्शन, बुढेसकालमा सजिलो छैन, तापमान अनुप्रयोगको विस्तृत श्रृंखला र उत्कृष्ट सीलिंग प्रदर्शनको विशेषताहरू छन्। तर उच्च विस्तार गुणांक, चिसो प्रवाह र कम थर्मल चालकता प्रति संवेदनशीलता सहित पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीनको भौतिक गुणहरू, यी विशेषताहरूको वरिपरि हुन सिट मोहरको डिजाइनको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, जब छाप सामग्री कडा हुन्छ, छाप को विश्वसनीयता नष्ट हुन्छ। यसबाहेक, पोलीटेट्राफ्लुरोइथिलीनको तापमान प्रतिरोध कम छ, र १ 180० than भन्दा कमको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो तापक्रम भन्दा माथि, सिलिंग सामग्री उमेर हुनेछ। तर दीर्घकालीन प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै, यो केवल १२० at मा प्रयोग हुनेछ।
② यसको नियामक प्रदर्शन स्टप वाल्भको भन्दा खराब हो, विशेष गरी वायमेटिक भल्भ (वा इलेक्ट्रिक भल्भ)।
4. Stop : भल्भलाई बुझाउँदछ कि बन्द हुने सदस्य (डिस्क) सिटको बीचको रेखासँगै सर्छ। डिस्कको आन्दोलनका अनुसार, भल्भ सीट ओपनिंगको परिवर्तन डिस्क स्ट्रोकको समानुपातिक हुन्छ। किनकि भल्भ स्टेमको शुरुवात वा बन्द स्ट्रोक तुलनात्मक रूपमा छोटो छ, र यो एक धेरै भरपर्दो कट-अफ प्रकार्य छ, र किनकि भल्भ सीट खोल्ने परिवर्तन भल्भ डिस्कको स्ट्रोकको प्रत्यक्ष अनुपातिक छ, यो धेरै उपयुक्त छ। प्रवाह नियमित गर्दै। तसर्थ, यस प्रकारको भल्भ काटन वा नियमन र थ्रटलिंगको लागि सहयोग गर्न धेरै गतिशील छ।
Opening खोल्ने र बन्द गर्ने क्रममा, डिस्क र भाल्भ शरीरको सिलि surface सतह बीचको घर्षण गेट वाल्भको भन्दा सानो हुन्छ, त्यसैले यो पोशाक प्रतिरोधी हो।
② उद्घाटन उचाई भल्भ सीट च्यानलको १/ 1/ मात्र हो, त्यसैले यो फाटक भल्भ भन्दा धेरै सानो छ;
; सामान्यतया, भल्भको शरीर र डिस्कमा त्यहाँ केवल एक सिलि surface सतह रहेको छ, त्यसैले निर्माण प्रक्रिया राम्रो र कायम राख्न सजिलो छ;
④ किनभने फिलर एस्बेस्टोस र ग्रेफाइटको मिश्रण हो, तापमान प्रतिरोध बढी छ। सामान्यतया, स्टप वाल्भ भाप भल्भको लागि प्रयोग गरिन्छ।
① किनकि भल्भको माध्यमबाट मध्यम प्रवाहको दिशा परिवर्तन हुन्छ, स्टप वाल्भको न्यूनतम प्रवाह प्रतिरोध अधिकांश अन्य प्रकारका भल्भहरूको भन्दा बढी हुन्छ;
Stroke लामो स्ट्रोकको कारण, खोल्ने गति बल भल्भको भन्दा सुस्त छ।
Pl. प्लग भल्भ : प्लन्जर आकार क्लोजर भागहरूका साथ एक रोटरी भल्भलाई जनाउँछ। ° ० ° रोटेशनको माध्यमबाट, भल्भ प्लगमा च्यानल पोर्ट जडान भयो वा भल्भ बडीमा च्यानल पोर्टबाट अलग गरिएको छ, ताकि खोल्ने वा बन्द गर्ने महसुस गर्न। प्लग एक बेलनाकार वा शंकु आकारमा हुन सक्छ। सिद्धान्त बल भल्भको जस्तै छ। बल भल्भ प्लग भल्भको आधारमा विकसित हुन्छ जुन मुख्यतया तेल क्षेत्रको शोषण र पेट्रो रसायन उद्योगको लागि प्रयोग गरिन्छ।
6. Safety : यसले प्रेसर पोत, उपकरण वा पाइपलाइनमा अत्याधिक संरक्षण उपकरणलाई जनाउँछ। जब उपकरण, पात्र वा पाइपलाइनमा दबाब अनुमतियोग्य मूल्य भन्दा बढ्दछ, भल्भ स्वचालित रूपमा खुल्नेछ र त्यसपछि उपकरण, पात्र वा पाइपलाइन र निरन्तर बढ्दो दबावबाट रोक्न पूर्ण मात्रामा डिस्चार्ज हुन्छ; जब दबाव निर्दिष्ट मानमा खसाल्छ, भल्भ स्वत: र समयमै बन्द हुन्छ उपकरण, जहाज वा पाइपलाइनको सुरक्षित अपरेशनलाई बचाउन।
Ste. स्टीम जाल र कम्प्रेस्ड हावाको माध्यममा, त्यहाँ कन्डेनसेट गठन हुन्छ। उपकरणको दक्षता र सुरक्षित अपरेशन सुनिश्चित गर्न, यी बेकार र हानिकारक मिडियालाई उपकरणको खपत र प्रयोग सुनिश्चित गर्न समयमै डिस्चार्ज गर्नुपर्छ। यससँग निम्न कार्यहरू छन्: ① यसले उत्पादन गरिएको कंडेन्सेटलाई द्रुत रूपमा हटाउन सक्दछ; Am भाप चुहावट रोक्नुहोस्; ③ निकास हावा र अन्य गैर-संघनीय ग्यास।
Press. दबाव कम गर्ने भल्भ : यो एक भल्भ हो जसले समायोजन गरेर निश्चित आवश्यक आउटलेट प्रेशरलाई इनलेट प्रेशर कम गर्दछ, र आउटलेट प्रेशरलाई स्वचालित रूपमा स्थिर राख्न मध्यमको उर्जामा निर्भर गर्दछ।
9 जाँच वाल्व : पनि काउन्टर-प्रवाह वाल्व, चेक वाल्व, फिर्ता दबाव वाल्व र एक-तरिका वाल्व रूपमा ज्ञात। यी भल्भहरू स्वचालित रूपमा पाइपलाइन माध्यमको प्रवाह द्वारा उत्पन्न बल द्वारा खोल्छन् र बन्द हुन्छन्, र एक स्वचालित भल्भमा पर्छ। चेक वाल्व पाइपलाइन प्रणालीमा प्रयोग गरिन्छ, यसको मुख्य कार्य मध्यम ब्याकफ्लो रोक्न, पम्प र ड्राइभ मोटरलाई उल्टाउनबाट रोक्न, र कन्टेनर माध्यमको डिस्चार्ज गर्नु हो। चेक वाल्भलाई प्रणाली प्रेशर माथि दबाबका साथ सहायक प्रणाली आपूर्ति गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्विंग प्रकार (गुरुत्वाकर्षण केन्द्र अनुसार घुमाउने) र लिफ्टिंग प्रकार (अक्षको साथ अघि बढेको) मा विभाजन गर्न सकिन्छ।
पोष्ट समय: मार्च 31१-२१२१
H12, Tengfei आधार, Xiaozhan Ind। क्षेत्र, Jinnan Dist।, टियांजिन, चीन (मुख्यभूमि)
फाइदा र विभिन्न v का नुकसान ...
रिपोर्ट: अभिनव नयाँ मेकानिकल कनेक्ट ...